Warbixin iyo Muuqaal:-Ciyaar ka dhacday Masraxa T-Mobile ee Las Vegas, Tani Guul ka weyn! – XOGMAAL.COM
Isla marki Khabib badiyay, wuxuu ka booday Shabaqa Octagon isagoo weeraray kooxdi Conor uu adeegsan jiray, Booliski Meesha joogay iyo istaafka ayaa kala dhex galay. Sidoo kale Conor oo tabcaan ah welina gudaha ku jira ayaa Saddex Khabib kooxdiisi ah dusha uga soo boodeen oo dhawr feer ka gaarsiiyeen, waa la xiray saddexdaa, laakiin wax yar ka dib waa la sii daayay.
Ciyaarti habeen hore ee MMA (Mixed Martial Arts) oo u dhaxeysay Khabib iyo Conor McGregor waxay lahayd xiiso gaar ah. Khabib wuxuu ka soo jeedaa Dagestan Russia, halka Conor uu yahay Irish.
Usbuucyadi ka horeeyay ciyaarta inti lagu jiray xayeysiinta loo sameeyo wuxuu Conor Isagoo wata rag bag badan weeraray Bas ay saarnaayeen Ciyaaryahano UFC ka tirsan oo Khabib ku jiro isaga ayuuna u dan lahaa. Maalin kale Khamri ayuu u soo taagay Khabib, wuu diiday wuxuuna u sheegay in uu Muslim yahay oo Xaaraan ka tahay.
Ka dib Conor wuxuu sameeyay in uu Diintiisi caayo oo ku tilmaamo mid dib u dhacsan oo aan ilbax ahayn, wuxuu ku tilmaamay argagixiso, wuxuu caayay Aabihii, reerkiisa, wuxuu u gefay Alle, wuxuuna sheegtay Ilaahnimo! Subaxaan Allaah.
Marki ay socotay mudo Bilo ah in sidaa Conor iyo kooxdiisu u aflagaadeeyaan Khabib, waxaa la gaaray waqtigi ciyaarta oo ka dhacaysay Masraxa T-Mobile ee Las Vegas, Mareykanka. Khabib wuxuu Conor ka badiyay wareegi 4aad ka dib marki uu is dhiibay isagoo Qoor-sagaaro ku haya dhulkana uu yaal, dhamaan afartaa wareeg isaga ayaa gacan sareeyay oo si fiican u garaacay, dhawr jeerna dhulka ku riday.
Xoriyatul Qawl ma aha in qof Aabihii, Reerkiisa, Diintiisa iyo Allihi Abuuray la caayo oo lagu jees-jeeso, Khabib ma caaytamin, wax dagaal ah ma sameyn mudada uu ninkaa kibirkiisa watay waayo wuxuu la sugayay inta uu, halka Soomaalidu u taqaan, Kala Reebta la tagayo. Si fiican ayuuna u garaacay oo aad uga gacan sareeyay. Ogow Khabib 27 jeer oo uu ciyaaray weli hal mar lagama badin! Ciyaartan u dambeysay ayaa u ahayd 27:0.
Xusuusnow: Kuwa loo yaqaan “Bully” sida Conor, oo ah kuwa dadka u cagajugleeya, aflagaadeeya, daba-gala, ceebeeya, wadada u istaaga, Hal Luuqad oo keliya ayay fahmaan, waana tan uu sameeyay Khabib.
Waa nuxurka Ciyaartii dhacday
Dheh: Maa Shaa Allaah
W/Q Farah Cawaash Beeldaaje